कार्तिक ५, २०७७ ०५:३१:५५
आश्विन ६, २०७७ रबिन्द्र गौतम
समाचारको बिषयलाई लिएर हेटौंडाको कोरोना ल्याबमा लफडा भएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशकको मनलाग्दी शिर्षकमा आइतबार बागमती खबरमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
उक्त समाचारको बिषय उठाएर प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक नारायण कार्कीको श्रीमती र छोरीले हेटौंडा स्थित ल्याबमा सोमबार अन्य कर्मचारीहरुलाई दुव्र्यवहार गरेका छन् । भित्रको कुरो बाहिर मिडियामा किन दिएको ? कसले दिएको भन्दै उनीहरुले अन्य कर्मचारीलाई थर्काउदै अभद्र व्यवहार गरेका छन् ।
हेटौंडाको कोरोना परिक्षण गर्ने ल्याबमा निर्देशक कार्कीले नियम बिपरित करारका कर्मचारी नियुक्ति गरेका छन् । जसमा उनकी श्रीमती।सालो र भाई पनि छन् । यस बिषयमा समाचार बाहिर आएपछि प्रयोगशालामा उनीहरुले अन्य कर्मचारीलाई दवाव दिएको खुलेको छ ।
३ गतेदेखिको रिपोर्ट आएन
सामान्यतया बिहान दिएको स्वाबको रिपोर्ट बेलुका आउने हेटौंडाको प्रयोगशालामा अहिले रिपोर्ट आउन निकै ढिलाई भएको छ । गत ३ गते दिइएको स्वाबको रिपोर्ट आजसम्म नआएको नगरिकले गुनासो गरेका छन् । केहिसमय अगाडी प्रदेश २ बाटसमेत स्वाब संकलन गरि हेटौंडाको ल्याबमा परिक्षा गरिन्थ्यो जसले गर्दा रिपोर्ट आउन निकै समय लाग्ने गथ्र्यो । तर हाल हेटौंडामा मात्र संकलन गरिएको स्वाबको रिपोर्ट प्रयोगशालाले जानाजान ढिलो निकाल्ने गरेको प्रष्ट देखिएको छ ।
रिपोर्टमा ढिलाई हुदा बिरामीले उपचार नपाइरहेको अवस्था छ । हेटौंडा स्थित चुरेहिल अस्पतालमा डाइलासिस गर्न आएका बिरामीले कोरोना परिक्षणको रिपोर्ट नआउदा उपचार पाउन नसकेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । डाइलासिस गर्नुपर्ने भएकाले ३ गते स्वाब दिइएको बिरामीहरुको अझै रिपोर्ट नआउदा उनीहरुले बेलैमा उपचार पाउन सकेका छैनन् ।
४ दिन अघि सम्म दैनिक रिपोर्ट आइरहेको प्रयोगशालामा समाचार प्रकाशित भएपछी निर्देशकको परिवारका सदस्य ल्याब भित्रै गएर हो हल्ला गर्नु, कर्मचारीलाई मिडियामा कुरा लगाएको भन्दै आरोप लगाउनु र अचानक रिपोर्ट आउने क्रम नै बन्द हुनुलाई संयोग मात्रको रुपमा लिन सकिन्न ।
प्रयोगशालाकै ढिलाईको कारण थुप्रै बिरामीले उपचार पाउन सकेको छैनन् । अति सम्बेदनशील स्थानमा बसेर निर्देशकले मनलाग्दी गर्दा नागरिकको ज्यान नै जिखिममा परेको छ ।
यसरी रिपोर्टमा ढिलाई गरेकै कारण बिरामीको ज्यान गए को जिम्मेवार ? सम्बन्धित निकायले यस प्रति तत्काल ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: मगलवार, आश्विन ६, २०७७, १०:०९:००
आश्विन २७, २०७७ रबिन्द्र गौतम
आश्विन २६, २०७७ रबिन्द्र गौतम